We.com.mm - ရေနွေးငွေ့က ဒီအချက် (၄) ချက်မှာ ကောင်းကျိုးတွေရှိစေနိုင်ပါတယ်နော်…
ရေနွေးငွေ့က ဒီအချက် (၄) ချက်မှာ ကောင်းကျိုးတွေရှိစေနိုင်ပါတယ်နော်…
ရေနွေးငွေ့က သင့်ခန္ဓာကိုယ်နေရာတော်တော်များများမှာ ကောင်းကျိုးတွေကို ဖြစ်စေနိုင်တာကို သင်ရောသတိထားမိရဲ့လား…။ ရေနွေးငွေ့ကိုဘယ်လို အသုံးပြုရမလဲဆိုတော့ ပွက်ပွက်ဆူထားတဲ့ ရေနွေးကို ရေဇလုံတစ်ခုထဲကိုထည့်ပြီး ရေနွေးငွေ့တွေ အပေါ်ကိုတက်လာတဲ့နေရာမှာ မျက်နှာကိုထားထားပေးလိုက်ရုံပါပဲ…။ ဒီနည်းလမ်းကတော့ မျက်နှာအသားအရေမှာရှိတဲ့ ချွေးပေါက်တွေကိုပွင့်သွားပြီး အသားအရေကိုလည်း ကြည်လင်ပြီးလှပလာစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။ နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ ရေချိုးတဲ့အခါမှာ ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ချိုးပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်…။ ဒီလိုမျိုး ရေနွေးကိုအသုံးပြုတာက သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေ ဖြစ်လာစေနိုင်တယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်…။
၁. အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်…
ရေနွေးကိုအသုံးပြုတာက သင့်အသက်ရှုလမ်းကြောင်းစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်…။ နှာခေါင်းနဲ့ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းတွေက ကောင်းမွန်တာကြောင့် အသက်ရှုမဝတာတွေကို ပျောက်ကင်းသွားစေပြီး သင့်ကိုလည်း လန်းဆန်းနေစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။
ခေါင်းကိုက်တာတွေကို ပျောက်ကင်းစေဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်း သင့်ကိုရေနွေးက ကူညီပေးနိုင်ပါသေးတယ်နော်…။ ခေါင်းကိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ရေချိုးက သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရော စိတ်ကိုပါလန်းဆန်းစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ သွေးလှည့်ပတ်မှုစနစ်တွေကိုလည်း ကောင်းမွန်စေတာကြောင့် ခေါင်းကိုက်တာတွေကိုလည်း ပျောက်ကင်းစေပါတယ်နော်…။
၃. ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာတွေကိုလည်း ပျောက်ကင်းစေပါတယ်…။
တစ်နေ့လုံး အလုပ်တွေလုပ်ထားရတဲ့အချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ကပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လေ…။ ဒီလိုအချိန်မှာ ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ရေချိုးပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုလန်းဆန်းစေပြီး ကိုက်ခဲနာကျင်နေတာတွေကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်…။
၄. အသားအရေနဲ့ ဆံသားတွေကို ကျန်းမာစေပါတယ်…။
ရေနွေးနဲ့ ရေချိုးတာက အသားအရေတွေကို ကြည်လင်စေပြီး လှပတဲ့အသားအရေမျိုးကို ရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။ ရေနွေးကြောင့် သင့်အသားအရေမှာရှိတဲ့ ချွေးပေါက်တွေကပွင့်သွားပြီး သွေးလှည့်ပတ်မှုအားလည်းကောင်းလာမှာပေါ့…။